Ciidamada DKMG oo la wareegay goobo hor leh oo ka mid ah Muqdisho (Sawiro) – SBC
Ciidamada DKMG oo la wareegay goobo hor leh oo ka mid ah Muqdisho (Sawiro)
Ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM ayaa wada isbalaarinta goobihii ay ka baxeen xoogaga Shabaabka ee ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka Waqooyi & waqooyi Bari.
Ciidaamdan iskaashanaya ayaa maanta la wareegay Isgoyska Fagax, Hotelkii Kaah ilaa Hotelka Ramadaan, waxaana dagaal ay la galeen maleeshiyaad agagaaraha Shineemo Puntland & wadada aada Ex Control Balcad.
Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM ayaa yoolkoodu yahay inay u gudbaan xaafada Hurwaa & SOS oo ay ku sugan yihiin xoogaga Shabaabka, iyadoo deegaanadaasi & Suuqa Xoolaha yihiin goobaha ay ku sugan yihiin.
Taangiyada ciidamada AMISOM ayaa haatan waxay ka dagaalamayaan agagaaraha Hotel Ramadanm & Fagax, waxaana madaafiic ay ku duqeynayaan goobo fog fog oo ka mid ah degmada Hurwaa.
Ciidamada AMISOM & kuwa DKMG ayaa doonaya inay fariisimo ka sameystaan warshada Baastada & sarta Xayle Bariise oo ka tirsan degmada Hurwaa, waxaase halkaasi ay kala kulmeen iska caabin kaga imaanaysa kooxaha Shabaabka oo deegaanadaasi ka dagaalamaya.